विश्वविद्यालयहरु मा नवीन शिक्षा
लामो समय को लागि रूस मा समकालीन उच्च शिक्षा यसको संरचना र प्रशिक्षण प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक छ। नयाँ समय नयाँ ज्ञान वितरण प्रणाली हुक्म। सबै विश्वविद्यालय कर्मचारी शिक्षण अनुभव को धेरै वर्ष मात्र होइन बलियो सैद्धान्तिक आधार, तर पनि व्यावहारिक अभ्यास, समय को आत्मा गर्न उपयुक्त आवश्यकता देखाउनुभयो।
विज्ञान को प्राथमिकता निर्देशन अत्यधिक योग्य कर्मियों को तयारी को लागि प्रविधी र आधुनिक विकासक्रम एक सेट छ जुन एउटा नवीन शिक्षा, भएको छ। यस क्षेत्रमा नवीनता आफ्नो पेशा र त्यो जीवित समयको अनुरूप, मानव व्यक्तित्व विकास गर्न प्राविधिक साधनहरूको मात्र होइन उपलब्धता, तर पनि विशेष ध्यान आवश्यक छ। एक व्यक्ति जटिल प्रविधि र सिक्ने नयाँ प्रकारका अन्तरक्रिया गर्न तयार हुनुपर्छ।
हामी वास्तविकता नै विश्वविद्यालयहरु मा नवीन शिक्षा सिर्जना भन्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, केही विश्वविद्यालयहरु आंशिक वैश्विक इन्टरनेट प्रयोग रिमोट सिक्ने हस्तान्तरण। यो प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्र मा प्रशिक्षण छैन सम्भव जसलाई किनभने यसको महंगा लागत को विशेषज्ञता विद्यार्थी रूस रिमोट भागहरु बस्ने लागि अनुमति दिन्छ। यसरी, नवीन प्रविधिहरू शिक्षामा बहुमूल्य कर्मियों, काम र प्रान्तीय विकास गर्न इच्छुक प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न साथै सिक्ने प्रक्रियामा, साथै उच्च शिक्षा सिर्जना शिक्षा एक अद्वितीय, आधुनिक प्रणाली। तिनीहरूले सुविधाहरू एक नम्बर:
- प्रक्रिया सबै चरणमा मा प्राविधिक पेशों को विशेषज्ञहरु को प्रशिक्षण मा एक एकीकृत दृष्टिकोण,
- आफ्नो कर्मचारीहरु गर्न भविष्यमा हाकिमहरूले को आवश्यकताहरु संग विश्वविद्यालयमा पाएको जानकारी अनुपालनको;
- अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तर संग रूस मा सबै विश्वविद्यालयहरु मा विशेषता मा शिक्षा, को लागि एक साधारण दृष्टिकोण;
- गहन विदेशी भाषाहरूको अध्ययन, विद्यार्थीलाई भावी पेशा बिना;
- विद्यार्थी ज्ञान को लगातार निगरानी। यो स्कोर महत्वपूर्ण छ, र निर्धारण जसमा वैज्ञानिक विषयों र व्यावहारिक प्रशिक्षण विद्यार्थी मा ज्ञान अंतराल छन्, कार्यक्रम समायोजन गर्न।
विश्वविद्यालयहरु मा आधुनिक नवीन शिक्षा विकास गर्न योगदान विषयों को परिचय समावेश संचार कौशल को कार्यस्थल मा थप सफल समायोजनका लागि विद्यार्थीहरूको। यो गर्न, प्रशिक्षण, भूमिका-निभाउने खेलहरू को एक किसिम सिर्जना गर्नुहोस्। परम्परागत शिक्षा प्रणाली असली दुनिया भिज्न गाह्रो भएका विशेषज्ञहरु तयार रूसी विश्वविद्यालयहरु मा। आज, सबै कुरा नयाँ जानकारी को ठूलो रकम काम गर्न र सीधा काम मा सिक्न सके खुला, मोबाइल पेशेवरों मूल्यवान छन्। यसरी, शिक्षा को नवीन विकास र विद्यार्थी सिक्ने को मनोवैज्ञानिक पक्षहरू समावेश छ।
अझै पनि विद्यार्थी सिक्ने प्रचार मा एक महत्वपूर्ण कारक समय आत्मा अनुरूप, भौतिक-प्राविधिक आधार हो। धेरै विश्वविद्यालयहरु अझै लामो देखि अप्रचलित गरेको कम्प्युटर छ। यो विश्वविद्यालय मा नवीन शिक्षा तपाईं अध्ययन सबै प्रक्रियाहरु स्पष्ट देख्न सक्छौं जहाँ सुसज्जित कोठा, एक प्रशिक्षण implies कि टिप्पण लायक छ। तसर्थ, विद्यार्थी त्यहाँ आफ्नो काम सबै दोष सच्याउन शिक्षकहरूको निर्देशन अन्तर्गत एक मौका छ जहाँ उच्च विद्यालय को पर्खालहरु मा अभ्यास मा सैद्धान्तिक ज्ञान परीक्षण हुनेछ।
विश्वविद्यालयहरु मा नवीन प्रौद्योगिकी को परिचय सबै आवश्यक शिक्षा कर्मचारी संग, चरणमा स्थान लिनुपर्छ बरु 35 वर्ष नै सारांश पढ्दा भन्दा, वास्तविक-समयमा उपयोगी हुनेछ भन्ने सान्दर्भिक जानकारी विद्यार्थीहरू प्रदान गर्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपस्थित हुनुपर्छ। आफ्नो पेशा मा कुनै पनि परिवर्तन गर्न चाँडै प्रतिक्रिया गर्न सक्षम हुन - यो सिद्धान्त एक युवा व्यावसायिक रूपमा, अभ्यास द्वारा समर्थित हुनुपर्छ।
अदालत मा क्रस-परीक्षा: अवधारणा, प्रकार, रणनीति
रूस मा आधुनिक शैक्षणिक शिक्षा
वास्तु रूसी विश्वविद्यालयहरु: मूल्याङ्कन, वर्णन, सुविधा र समीक्षा
कसरी घर मा मह बियर बनाउने?
सानो सुन्दरता। पत्ते द्वारा violets को पुनरुत्थान
को घरेलु मा बेड कसरी बनाउने? राम्रो र उपयोगी!
किन जिब्रो मा sores थिए?
भाड बवासीर: समीक्षा
स्वादिष्ट घर बनाएको: मसालेदार खीरे, को जाडो मा खस्ता!
Numerology मा आफ्नो नम्बर तपाईं कसरी थाहा छ? Numerology मान संख्या
Fluorspar, fluorite वा: विवरण र आवेदन गुण
चिकन भराई को स्टीम cutlets: एक नुस्खा। आहार cutlets
कुञ्जीपाटीमा रूट कसरी लेख्नको विवरण